राजनीतिक स्खलन र नागरिक कर्तव्य | Himalaya Post
राजनीतिक स्खलन र नागरिक कर्तव्य
Posted by Himalaya Post | ३१ असार २०७८, बिहीबार १९:१३ |
राजनीति देशको लागि मेरुदण्ड हुन्छ । राजनीति समाजको जीवन पद्धति हुन्छ । राजनीतिले नै जनताको मनोवृत्ति र देशको गौरवलाई उचो राख्ने कार्य गर्दछ । तर यदि स्खलन भएमा यसले एउटा ठूलो चक्रवातमा देश र जनताहरूलाई लैजान्छ । विचार, सिद्धान्त र व्यवहारको भुमरीमा दिग्भ्रमित बनाइदिन्छ । तथापि देशका बौद्धिक र सचेत नागरिकले समयमा नै श्रवण, मनन र बोध गर्न सकेमा चक्रव्यूहरूबाट बाहिर आउन सकिन्छ अन्यथा महाभारतका अभिमन्यूको हालत हुन सक्छ । त्यसैले सबै बौद्धिक र सचेत नागरिकले बोधपूर्ण विचार मन्थन गर्दै यथार्थपरक सुझबुझबाट मार्गदर्शन गर्न र हुन सके अझै पनि समय व्यतित भइसकेको छैन ।
यद्दपी म कुनै राजनीतिक विश्लेषकको उपाधि पाएको व्यक्ति होइन । जीवनको लामो समय, आजसम्म विद्यालयको शिक्षण पेशामा कर्मशील साधारण नागरिक हो । तथापी यस लेखमा मेरो स्वअध्ययन र अनुभवको सँगालोलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु । यसलाई पढ्नु हुने सवै अध्ययनशील र देशप्रेमी महानुभावहरूलाई निश्पक्ष र निरपेक्ष भएर देश जनता र समाजसँग सकरात्मक उत्प्रेरक तथा मार्गदर्शक भइदिन विनम्र आग्रह गर्दछु ।
दृढ इच्छा शक्तिले असम्भवलाई सम्भव बनाइदिन्छ । ‘एरोडायनामिक्स’को नियम (हवाइजहाज उडाउने नियम) लाई आधार मान्दा भमराको बनावट यस्तो प्रकारको हुन्छ की उसलाई उड्न सम्भव हुदैन । तर उसको दृढ इच्छा शक्तिले, उड्नको लागि शुरुमा आफ्नो सम्पूर्ण प्राणशक्ति लगाएर पखेटा फटफटाउँछ । पखेटाको जोडसँगको फटफटाहटले त्यहाँ एक प्रकारको भुमरी बन्छ । उक्त भुमरीको खिचाइको कारणले भमरा उड्न सफल हुन्छ । यस प्रकार दृढ र सच्चा मनसायबाट प्रयास गर्दा असम्भवलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ ।
“यदि मलाई शब्दकोशको अधिकृत बनाइदिए असम्भव शब्द नै हटाइदिन्छु ।” – महान रकेट डिजाइनर बाँन ब्राँन
“मलाई १०० जाना कर्मशील , लगनशील दृढशङ्कल्पित युवाहरु देऊ, म संसार नै बदलिदिन्छु ।” – स्वामी विवेकानन्द
जन्मेका सम्पूर्ण प्राणीको एक मात्र प्रिय वा प्रियतम भनेको स्वतन्त्रता हो । दोश्रो सुरक्षा हो । यही स्वतन्त्रतालाई स्वभिमान, आत्मसम्मान भन्ने गरिन्छ । प्रजातन्त्रको आधार मानिन्छ । तथापि स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारीमा परिणत भएमा अराजक र मानविय हित विपरित र स्वयमलाई समेत हानिकारक हुन पुग्छ । मानव जाति अन्य सृष्टिका प्राणीहरूभन्दा उच्च यस अर्थले मानिन्छ कि उनीहरूसँग मन र बुद्धि हुन्छ । अझ त्यो भन्दा अगाडी विवेक छ ।
विवेक के हो ? यसलाई कसरी सम्हाल्ने ? विवेकको प्रयोग कसरी गर्ने ?
“विवेक आत्माको ज्योति हो । मनुष्यको मनमन्दिमा बलिरहेको हुन्छ । यो यति वास्तविक छ कि जति जीवन छ ” – भारतीय पूर्व राष्टपति स्व.अब्दुल कलाम
जब कसैले सदाचारविरुद्ध आचरण गर्दछ उक्त ज्योतिले विरोध गर्दछ । विवेक सत्यको स्वरुप हो । जुन हाम्रो आनुवंशिक भण्डारबाट ज्ञानको रूपमा निक्लन्छ र हाम्रो कर्म अर्थात राम्रो–नराम्रो अनुभवमा बदलिन्छ । विवेकको फलक विशाल हुन्छ जसमा हाम्रो अपराधहरू रजिस्टर्ड भएको हुन्छ । यो एक डर लाग्दो शक्ति हो । यसले डराउँछ, आश्वासन दिन्छ, पुरस्कार दिन्छ र दण्डित गर्दछ । जो कोही यसैको नियन्त्रणमा हुन्छ । यदि विवेकले पहिलो पटक जवाफ दिन्छ भने यो चेतावनी हो । जव दोश्रो पटक सचेत गर्दछ तब व्यक्तिको कार्यलाई निन्दा गर्दछ । विवेकको अलवा अरु पनि सकृय भइरहेका हुन्छन् । जस्तो डर, लोभ, गर्व वासना आदि । डरले सोध्छ , के सुरक्षित छ ? लोभले भन्छ के यसमा कुनै लाभ छ ? गर्वले भन्छ , के म यसबाट महान बन्न सक्छु ? वासनाले भन्छ , के यसमा कुनै मनोरञ्जन हुन्छ ?
तर, विवेकले भन्छ के यो उचित हो ? हामी आफ्नो अन्तरआत्मबाट उठ्ने विवेकको आवाज किन सुन्दैनौ ? यसले घचघचाउँदा पनि बेखवर किन हुन्छौ ? यसको आलोचनालाई लापर्वाही किन गछौँ अर्थात हामी किन विवेकशुन्य जस्तो भएका छौँ ? यी सबैको एउटै उत्तर हामी टुक्र्याइएका छौं, विभाजित भएका छौं अर्थात क्रप्ड भएका छौँ । अझ अगाडि भन्नुपर्दा भ्रष्टचार नै हो । यो नै हाम्रो विवेक प्रतिको प्रहार हो । तर डर, लोभ, गर्व वासना तथा अहंकार र अहं भावनाले गर्दा विवेकलाई तिरस्कृत गर्ने आदत बनेको छ । हामीले यही मानेर बसेका छौँ कि म ठीक छु । तर हामी विज्ञानको नियम क्रिया–प्रतिक्रिया ९ब्अतष्यल–चभबअतष्यल० बाट अपरिचित छौँ । यद्यपि जानिफकार त छौं तर त्यसको बोध र समझबाट टाढा भएका छौँ ।
हामीले यो नभुलौँ कि हाम्रो सोच, विश्वास क्रियाकलाप अवचेतन मनमा पर्छ । अवचेतनको प्रभाव फेरि हाम्रो मनमा र अरु कयौँमा कति धेरै पर्छ ? भन्ने कुरामा हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौं । जस्तो यदि तपाईँ घुस लिनुहुन्छ भने यसको असर अवचेतन मनको माध्यमबाट तपाईँको विचार र अरु कयौंमा पर्दछ । तपाईंको यो बेइमानी तपाईँको अघिल्लो पुस्तामा पुग्छ । के यसले उनीहरुको हित हुन सक्छ ?
मनोविज्ञानले मनको अध्ययन गर्दछ तर कसरी ? व्यक्तिको शारीरिक बनोट व्यवहार हाउभाऊ तथा शारीरीक संकेतहरू र उसको अभिव्यक्तिको आधारमा गरिने अध्ययन नै मनोविज्ञानका क्षेत्रहरु हुन् । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त ति विभिन्न अभिव्यक्तिको पछाडी के कारण हुन सक्छन् भन्ने मनोविज्ञानको चुरो (गुदि) भित्र पर्दछ ।
नेपालको राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको चर्चा गर्दा वि.पि. कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितहरूको कुरा, त्यसैगरि राजा महेन्द्र तथा उदारवादी राजा विरेन्द्र सम्मलाई लिन सकिन्छ । माथिका सवै नेतृत्व गणहरुको दोष अवश्य थिए होलान् तर उहाँहरुको देशभक्ति जनताप्रतिको सकरात्मक अवधारणा, निष्टा, कर्मशीलता तथा आदर्श व्यक्तित्वमा आज कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन र मिल्दैन । तर उनीहरुलाई या त मारियो या देश द्रोही तथा भारत परस्तसम्मको जघन्य आरोप लगाइयो या पलायन तथा सन्यास लिन बाध्य पारियो वा बाध्य बनाइयो । २००७ साल यताको कुरा गर्दा त अस्थिरता, प्रतिसोध, मनमुटाब, युद्ध र संघर्षको परिधिभित्र अस्वभाविक देशभक्त, जनभावनाको कदर, समृद्धि विकासको कुराहरुको धज्जी उडाउने कार्यहरु मौलाएको देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको कुरा गर्ने हो भने, जस्तो शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव, बाबुराम, महन्त ठाकुर तथा के.पि ओलिहरूलाई लिन सकिन्छ । उनीहरूको इतिहास केलाउने हो भने, सम्पूर्ण जीवनको दुई तिहाईँ समय अर्थात आधा शताब्दी नेपाली राजनीतिको सेरोफेरोमा सर्मपित देखिन्छ । जेल नेल दुःख कष्ठको खात लागेको पाइन्छ । उहाँहरूको त्यस बेलाको शब्द र जनता प्रतिको मनोभाव, अभिप्राय तथा उद्धेश्य स्पष्ट र निर्दोश देख्न सकिन्छ । तर तिनै व्यक्तिहरू आज जनताको सामु अपहेलित भएका छन् ।
नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्ड जस्तो जंगबहादुर राणाको उदय अगाडी र पछि २००७ साल सम्म, २००७–२०१७ सम्म , २०१७–२०३६ सम्म, २०३६–२०४६ सम्म, २०४६–२०६३ सम्म र २०६३–२०७२ सम्म र तत् पश्चात हालसम्मको राजनीतिको पृष्ठभूमिको विकासलाई हेर्दा यही अस्थिरताको सेरोफेरोमा मौलाएको तथा नकरात्मक मनोवृत्तिमा नै रमाईरहेको पाइन्छ ।
नेपालको नेतृत्व किन यसरी असाधारण रुपमा असफल भइरहेको छ ? के नेपालमा त्यस प्रकारको देश र जनताको पक्षमा समर्पित नेतृत्व नजन्मेको हो र ? विडम्बना भन्नु पर्छ, जव जव नेपाली राजनीतिको मुल ढोका प्रवेश गर्दछन् या त मरिन्छन् या बदनाम गरिन्छ या गुमनाम गराइन्छ । जव जव स्थायित्वको लागि नेपाली जनताले कुनै दल तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई बहुमत दिन्छन् त्यो १ देखी ३ वर्ष पनि नटिकीकन छिन्न भिन्न हुन्छन् । नेताहरु चाहेर पनि मिल्न सकिराको हुदैनन् र कसैले पहल ग¥यो भने ऊ नै शंका र उपसंकाको घेराभित्रको अलोकप्रिय पात्र हुन्छ र लगभग विस्तापित हुने अवस्थामा पुग्ने भएपछि कुनै गुट र उपगुटमा गएर जोडिन्छ ।
आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? नेपालका बुद्धिजीवि भन्नेहरु, पत्रकार, अधिवक्ता, लेखक–कलाकार ……. आदि सबै यहि अस्तिरता र गुट उपगुटको शिकार भइरहने हो ? र सधैभरी यस्तै प्रकारको डम्फु बजाउन, आ–आफ्नै तालका तर्क–वितर्क मै अभ्यस्त भइरहने हो ? सर्व साधारणमा यति नकरात्मक मनोवृत्ति र अविश्वास, निराशा मौलाइरहेको कुरा, सोसियल मिडियामा तथा चोक बजारमा देखिने अभिव्यक्तिबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसको पछाडिको राज अथवा कारण खोज्ने प्रयास गर्ने हो कि ? कुन शक्तिले नेतृत्वलाई विभाजन गर्न र गराउन लागि परेका छन् ? यहाँ फेरी विदेशी शक्ति, अथवा भारतीय रणनीतिको हवला दिएर पानी माथिको ओभानु हुने प्रयास नगरौ । नेतृत्व चङ्गुलमा फस्न सक्छन् तर त्यसको चिरफार र समाधानको जिम्मा एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सचेत नागरिकको हुन्छ । तथापी भन्न मन लाग्छ, आफूलाई उच्च वर्ग र समुदाय भन्नेहरुलाई यसको मयाजालमा परिरहेको आभास पनि भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ । अर्को वर्ग मुकदर्शक हुनु सिवाय केही नगर्ने भएको छ । यसबाहेक एक मेहनत नगर्ने तर सुविधा र मनोरोञ्जनको दास हुने आफूले खाएको थाल समेत नमाझ्ने तर पद र पैसाको लागि जुत्ताको तलुवा चाट्न पनि अघि सर्ने मनोवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । यद्यपी दोष कसैमाथि नथुपारौँ किनभने यो सवै गरिबी, अशिक्षा र उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा अथवा भनौ आजको मानवीय आवश्यकताको असुरक्षाले जन्माएको मनोवृत्ति हो । । बरू यसको पछाडि कतै योजनाबद्ध श्रृङ्खला त छैन ? सोच्ने बेला भएको छ ।
अझ आश्चर्य लाग्दो त, नेपाली उखानमा कागको बठ्याइँ भनेझै ती वर्गलाई थाहा नभएको केहि छैन । सवै विषय र क्षेत्रमा ज्ञान राख्दछन् तर व्यवहार र अभिव्यक्ति हेर्दा मनै खिन्न भएर आउँछ । जस्तो साधु–सन्तको कुरा गर्दछन् । मरेर कसले के लगेको छ ? मलाई पैसा पद केहिको लोभ छैन अथवा इश्वर, परमात्मा, बुद्धत्व जस्तो परम ज्ञानको कुरा गरिरहन्छ र त्यसै बिचमा तरकारी पसलमा तरकारी पसलले ५० रुपैयाँ किलो टमाटर ६० रुपैयाँ भन्यो भने, शायद उसको खरिद मूल्य नै बढी प¥यो कि, शायद उसको केहि टमाटर कुहियो कि भनेर एकछिन पनि सोच्दैन । त्यो गरिवसँग झगडा गर्ने , तँ यहाँ लुट्न बसेको हो भन्ने र सकेसम्मको आँखा तर्ने गर्दछ । मानी लिउँ अरुलाई आच्छेप लगाउने र दोष देखाउने कुरामा पि. एच. डि नै गरेको छ तर आदर्श, ज्ञानगुनको कुरामा अरुलाई बोल्ने अवसर नै दिदैन । यदि अवसर दिन्छ भनै आफु बोल्ने तयारीका लागि दिने गर्दछ ।
अर्को पक्षबाट कुरा गर्दा नोकरशाही प्रवृति हावी भएको देखिन्छ । जस्तो काममा बोस वा हाकिमको कारणले दुःखी हुन्छ , घरमा श्रीमतिमाथि रिस खनाउँछ । श्रीमतिले छोराछोरीमाथि, छोरा छोरीले घरमा पालेको कुकुर बिरालो वा खेलौनामाथिको व्यवहार अचेतन रुपले भइरहेको हुन्छ । नेताहरुको भाषण, कर्मचारीहरुको बफादारी पूर्ण अभिव्यक्ति, शिक्षक–प्राध्यापक लेखक–बुद्धिजीविको चिन्तन र चासो सर्वसाधरणको चित्त दुखाईको कुरा सुन्दा र देख्दा यस्तो लाग्छ देश त उहिल्यै रामराज्यको कथामा उल्लेखित शु–सासन र समृद्धि भएको पनि शताब्दी भइसक्यौ तर यर्थातमा …?
कुनैपनि राष्ट्रमा राजनीतिक स्खलनको परिस्थिति सिर्जित हुँदा न्यायालय सक्रिय भएको हुन्छ । न्यायलयको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुशानका लागि हो । यद्यपि निर्णय सही हुन्छ भन्न सकिँदैन । किनभने आयातित ज्ञान, लोभी-पापी मन र आवनात्मक आवेगका तथाकथित बौद्धिक अभिव्यक्तिहरूले सर्वसाधारणमा विकास भइरहेको मनोवृत्तिको सेरोफेरोमा न्यायलयपनि अछुतो रहन सक्दैन । त्यही सेरोफेरोमा भइरहेको न्यायलयको निर्णय व्यापारी मनहरूको लागि हर्ष र गमको परिधिमा घुमिरहेको हुन्छ । तर स्मरण रहोस, यो त नेपाली उखानको ‘फूल फुलन्ती कोपिला हसन्ती’ भनेजस्तो मात्र हो ।
अन्तमा, म विनम्र आग्रह गर्न चहान्छु … अब सोचौ ! मनन गरौ ! सबैले अरुलाई दोषारोपण गर्नु भन्दा आफूलाई हेरौँ । मेरो काहाँनेर सुर्धान पर्ने छ । मैले मेरो लागि र मेरो वरीपरिको परिवार र समाजको लागि के गर्न सक्छु । कमसेकम अरुलाई कुनै प्रकारको क्षति नगरी साहानुभूति कसरी राख्न सक्छु । अरुले के गरिराखेको छ भन्ने कुरामा भन्दा मैले के गर्न सक्छु र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याई कार्यान्न्वयन गर्न सके मात्र आजको सामाजिक मनोवृत्तिमा सकरात्मक उर्जा भर्न सकिन्छ । किनभने व्यक्ति व्यक्ति मिलेर समाज बन्ने हो । व्यक्ति समाजको हिस्सामात्र होइन, ऊ समाजको अगुवा पनि हो ।
ईश्वरले हामी सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गरुन, सकारात्मक चिन्तनका लागि उर्जा भरुन , कल्याण गरुन !!
Previousयूनियन लाईफको आईपीओ बाँडफाँड, १६ लाखको हात रित्तो
Nextप्रधानमन्त्री देउवाको महान्यायाधिवक्तामा खम्मबहादुर खाती
देउवा सरकारले १४ भदौपछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर हुदैं
२१ असार २०७५, बिहीबार ०८:१८
भिडभाड हुने कुनैपनि प्रकारका गतिविधि नगर्न जिल्ला प्रशासनको निर्देशन
दशैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ आजबाट खुल्यो
९ आश्विन २०७५, मंगलवार ०८:१७